Imithelela KumaGada Ezokuphepha asebenzisa Amakhamera Worn-Worn - Izixazululo ze-OMG
E-Asia, indawo lapho amaphoyisa egqoka khona amakhamera omzimba yanda ngokushesha ukunciphisa udlame phakathi kwamaphoyisa nezakhamizi. Kukholelwa kakhulu ukuthi ukusatshalaliswa kobuchwepheshe bekhamera yomzimba kuzocacisa umthwalo wamaphoyisa, ngokwenza kanjalo kwenziwe ngcono ukuphepha kwezakhamizi. Noma kunjalo, kunedatha encane kakhulu engasetshenziswa njengesisekelo sokwenza ukuphepha.
Amaphoyisa akholelwa ukuthi le khamera egqoke umzimba ingakhuphula ikhono lamaphoyisa lokusesha nokuthuthukisa ukusebenza obala nokuziphendulela kwemisebenzi yamaphoyisa. Amanye amaphoyisa ahlonyiswe ngekhamera efakwe emzimbeni ukuvivinya ukusebenza kwawo. Ithimba lamaphoyisa lizwakalise ukugculiseka ngemiphumela yezivivinyo ngoba amavidyozi athathwe yikhamera egqoke umzimba anembe kakhulu kunokwethulwa ngomlomo.
Abanye abantu bacabanga ukuthi ikhamera egqoke umzimba ingenza ukuthi amaphoyisa akwazi ukusesha ngendlela enenhloso, ephendula futhi esobala, ngaleyo ndlela enze ngcono ukusebenza komthetho. Kodwa-ke, amanye amaLungu akhathazekile ngokuthi njengoba amaphoyisa enganquma "ukuthi angarekhoda noma cha ukuqopha nokuthi aqale nini ukuqopha" futhi namaphoyisa uqobo angarekhodwa, ikhamera egqoke umzimba kungenzeka ingakwazi ukwethula lesi sigameko ngokuqondakalayo nangokungenzeleli. Futhi, ikhamera egqoke umzimba ingaqoqa imininingwane eminingi nedatha kunesidingo sokuphoqelelwa komthetho, iphakamise ukukhathazeka ngezinkinga zokuvikela ubumfihlo.
Ukuphepha okwengeziwe ezakhamuzini nasemaphoyiseni?
Ekuqaleni, izidumbu zoMzimba zihlolwe yizinhlaka zomthetho. Ukuphatha kufanele kuhlolwe futhi uma ubuchwepheshe sebuvuthiwe. Kepha yini okufanele yenziwe amakhamera omzimba? Sibheka ubuchwepheshe obusha nge-angle ekhethekile.
Ama-body-cams kumele avikele amaphoyisa ekuhlaselweni
Ukubhekwa kwevidiyo manje kusetshenziswa kabanzi esakhiweni sangasese ukuvikela impahla ezigebengwini. Uma nje izingxenye zesithombe zibonisa kuphela indawo yangasese, ukusetshenziswa kuvunyelwe. Ukubhekwa kwevidiyo ezindaweni zomphakathi, kunemikhawulo emikhulu, eye yaphoqa uMkhandlu Wombuso ukuthi uthathe isinqumo ngokusetshenziswa kwamakhamera womzimba.
Amaphoyisa agqoke ikhamera angabonakala ngokumaka ngombhalo othi "Ukuqoshwa kwevidiyo". Noma kunjalo, amakhamera awasebenzi unomphela. Uma kwenzeka kuba nezingxabano ezizayo, amakhamera avulwa yizikhulu.
Ngasikhathi sinye, abasekeli bezobuchwepheshe obusha bezokuphepha bagcizelela ukuthi amakhamera akufanele avikele iphoyisa kuphela. Kusukela kaningi ngodlame lwamaphoyisa olukhulunywa njalo, amakhamera kumele futhi asetshenziswe uma kubekwa icala lamaphoyisa enkantolo njengobufakazi. Ngakho-ke kungenzeka ukubheka ukuthi ngabe yizenzo zezikhulu empeleni ezazingaphandle kohlaka olujwayelekile.
Ngabe abaphathi abalindayo bathola muphi umphumela kusetshenziswa ama-Cams womzimba?
Udlame nokungahloniphi iphoyisa kufanele kube nokuqukethwe
Izinsimbi zomzimba kufanele zibe nomthelela wokuvimbela kulabo abahlukumezayo abanodlame
Esimweni esiphuthumayo, ukuqoshwa kwevidiyo ezingxabanweni zomthetho kufanele kube njengobufakazi
Ama-body-cams kufanele futhi akhiqize ingcindezi yokuvumelana namaphoyisa, okubenza baziphathe kahle
Ngokuvamile, kususelwa kokuhlangenwe nakho kwendawo nangaphesheya, amaphoyisa aqapha ngekhamera egqoke umzimba enalezi zinzuzo ezilandelayo:
(a) Ukuqopha ukwenzeka kwezigameko ngokwethembekile: Lezi ziqeshana zamavidiyo zingakhulisa ukuziphendulela kwamaphoyisa nokwethembela komphakathi embuthweni wamaphoyisa ngenxa yobubanzi obubanzi bamakhamera agqoke umzimba noma izigcawu zokuqopha;
(b) Lungiselela ukuphenya kanye nokushushiswa: Amaphoyisa angasebenzisa i-footage ethathwe yikhamera egqoke umzimba njengobufakazi bokuqhubeka kophenyo lobugebengu. Uma amaphoyisa enquma ukushushisa, izingcezu ezifanele zingasetshenziswa ukunikeza ubufakazi enkantolo;
(c) ukusheshisa ukulungiswa kwezikhalazo noma ukumangalelwa: ukuvezwa kwekhamera okugqokwa ngumzimba kunganciphisa izingxabano ebufakazini futhi kusheshise ukulungiswa kwezikhalazo futhi icala
(d) Izingxabano ezidambisayo: Amakhamera aphathekayo agqokwa ngomzimba abhekwa njenganomthelela ovimbelayo futhi angakuvimbela ngempumelelo ukusebenza okukhulu. Lapho umphakathi wazi ukuthi ayahlungwa, zivame ukwehlisa umoya bese kunciphisa ukungqubuzana okukhona phakathi kwamaphoyisa nezakhamuzi.
Ngakolunye uhlangothi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba ekusebenzeni komthetho kudonsele ukunakwa nokungabaza, kubandakanya:
(a) Amaphoyisa angakhuphula amandla okusetshenziswa kwamandla ezimweni ezithile: Ngokusho kocwaningo, kwinqubo yokusebenzisana namaphoyisa, uma amaphoyisa enokuqonda okukhulu kokuthatha isinqumo sokuvula noma ukuvala ikhamera egqoke umzimba, noma ngokwandisa amaphoyisa Ithuba lokusebenzisa amandla.
(b) Izinkinga zobumfihlo: Okokuqala, njengoba amaphoyisa enokuqonda okugcwele kokunquma ukuthi aqale nini futhi ayeke ukuqopha, kunokukhathazeka ngokuthi amaphoyisa angathatha izingcezwana eziningi ezingahambisani nobugebengu. Okwesibili, amapholisa angafaka isithombe esibuhlungu sezisulu zobugebengu kanye nabantu abathinteka enqubweni yokutakula noma ezingozini ezinekhamera egqoke isidumbu ngokwephula intando yomthwebuli wezithombe. Okokugcina, kukhona ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba angahle aphule amalungelo noma amalungelo asemthethweni abantu abathile (njengofakazi, abafundisi bemfihlo, izisulu, abantu abadinga ukugqoka izingubo zangaphansi uma besesha, njll.).
(c) Ilungelo lokuthola imininingwane yomuntu siqu: Ngokomthetho ofanele wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu, amalungu omphakathi angakwazi ukufinyelela ukuqoshwa kwevidiyo kwamakhamera wevidiyo ephathekayo aqukethe izithombe zawo. Njengoba iziphathimandla zingadinga ukumboza izithombe ezihlotshaniswa nokuqoshwa kwevidiyo kuqala, lokhu kungaphoqelela umthwalo owengeziwe wokuphatha emaphoyiseni.
Ukuphendula ukukhathazeka okungenhla, kukhona "imihlahlandlela ecacile neqinile" elawula ukusetshenziswa kwamakhamera evidiyo aphathekayo:
(a) Ividiyo isuselwe kumcimbi: ikhamera egqoke umzimba ingasetshenziswa kuphela “ezigcawini zokubhekana” noma “uma kuba nokuthula kwezenhlalo okwenzekile noma okungenzeka kube khona”;
(b )okweluleka amaqembu ngaphambi kwevidiyo: Amaphoyisa asebenzisa ikhamera egqoke umzimba kumele agqoke umfaniswano bese elenga ikhamera egqoke umzimba iyunifomu. Akusebenzeki endaweni enenjongo, uma kungenjalo, amaphoyisa kufanele azise amaqembu ngaphambi kwesikhathi sokuqala ukuqoshwa. Ngesikhathi sokuqoshwa, ithuba lokuqoshwa kwikhamera libonakala libomvu, nesikrini esiboniswe ngaphandle sizokwazisa iqembu ukuthi liyaqoshwa futhi liyakwazi ukubona isithombe esirekhodiwe. Lapho iphoyisa liqala ukuqopha, kufanele liqale ukuqopha igama lalo, isikhathi nendawo eyaqoshwa, kanye nencazelo yomcimbi ozoqoshwa;
(c) Ukubhubhisa iziqeshana zevidiyo ezingasizi ngokubaluleka kokuhlolwa: Iziqeshana zamavidiyo athathwa njengabalulekile kulolo cwaningo aguqulwa aba ngamakhophi amabili e-CD-ROM, elinye lawo azosetshenziswa njengobufakazi kanti elinye lizosebenza njengekhophi lomsebenzi wokuqhubeka kophenyo. Iziqeshana zevidiyo ezingakhonjelwa ekuphenyweni noma ebufakazini benani zizobhujiswa ngemuva kwezinsuku ze-31 kusuka ngosuku lokuqoshwa; futhi
(d) Izidingo zobumfihlo: Ngokwe-Odinensi Yemininingwane Yobuntu (Ubumfihlo), umphakathi unelungelo lokucela ukufinyelela kwimininingwane yomuntu siqu egcinwe ngamaphoyisa, kufaka phakathi iziqeshana zevidiyo. Zonke izicelo ezinjalo zizocubungulwa yiMigomo.
Izifundo ezinokwethenjelwa okwamanje azitholakali, okufakazela ukuthi ukusetshenziswa kwe-Body-cams kuletha imiphumela efiselekayo yezinyunyana nosopolitiki.
Ngaphezu kwakho konke, uNgqongqoshe Wezangaphakathi kanye nezinyunyana zamaphoyisa zinethemba lokuthi ukusetshenziswa kwamakhaza omzimba kuzohlinzeka ngokuphepha okwengeziwe ezisebenzini. Ngakho-ke, amanye amazwe asemgqeni wokubonisana asetshenziswa, lapho ukusetshenziswa kwama-body-cams kufakazelwe kuze kube manje.
Ukubuka okuphelele kwe-6530 Ukubuka kwe-3 Namuhla